Soomaaliya oo dib u soo ceshatay kaalinteedii caanka ahayd ee Afrika – Bandhiga
Soomaaliya ayaa ka mid ahaan jirtay dalalka dhaca geeska Afrika kuwooda ugu saameynta badan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadgalyada oo ku dhowaad 30 sano ku jirtey burbur iyo deganaansho la’aan ayaa hadda waxa ay kaalin muuqata ka qaadaneysaa isku soo dhowaanshaha xiriirka iyo nabadeynta dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Eretria iyo Jabuuti.
Soomaaliya waxey heshiis nabadeed dhex dhigtay Tanzania iyo Uganda sanadkii 1972-kii oo ay horay ugu guul darreysteen heshiiskaas nabadeed dalalka Kenya iyo Masar, dowladii uu hoggaaminayey Allaha u naxariistee Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa soo diyaarisey Shan qodob oo dalalkan lagu heshiisiinayo, waxaana ugu weynaa in khilaafkooda ay fursad u tahay gumeystayaashii Afrika.
Cumar Carte Qaalib oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dowladdii Kacaanka ayaa Magaalada Muqdisho ku kulmiyey wasiiradii arrimaha dibadda ee Uganda iyo Tanzania, halkaa oo Labada dal ay ku heshiiyeen, waxaana Madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre loogu magac daray waddo ku taalla Magaalada Kampala.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale hadda kaalin weyn ka qaadaneysa is dhexgalka dhaqaale iyo bulsho ee gobolka Geeska Afrika, si loo dardargeliyo ganacsi iyo maalgashi, kobciya iskuna xira bulshada iyo dhaqaalaha Geeska Afrika, taa oo Soomaaliya u fureysa ganacsi bulaala iyo fursado badan.
Muddo yar ka hor, dalalka gobalka Geeska Africa waxaa ay gaari jireen go’aanno waa weyn iyadoo aan wax tixgelin ah laga siin jirin Soomaaliya oo adduunka kaga taalla meel istraatiiji ah.
Bulshada Soomaaliyeed waxey arrintaan u aragtaa in wadamada deriska miisaanka uu dalkeennu leeyahay, iyadoo ay xusid mudantahay in dalalka geeska Africa ay soo gaari jirey go’aannada laga qaadanayo xaaladaha Soomaaliya ay soo martay oo qaarkood hadda ay ku jirto.
Booqashadii taariikhiga aheyd ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu ku tagay dalka Eretria kadib markii ay heshiis nabadeed oo horudhac ah kala saxiixdeen dalalka Itoobiya iyo Eretria oo colaad ay ka dhaxeysay ayaa Madaxweyne Farmaajo dib usoo celiyey xiriirka Soomaaliya iyo Eretria waxaana ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ay ugu horreeyaan arrimaha nabad-galyada gobolka iyo iskaashi ganacsi.
Dedaaladda ay waddo Soomaaliya ayaa ah kuwo ay kaga go’an tahay xal-u-helidda nabadda iyo xasilloonida gobolka, waxaana maalmo ka hor dowladaha Jabuuti iyo Eretria ku heshiiyeen in ay xiriirkooda dib u hagaajiyaan, islamarkaana bog cusub u furaan danaha Labada waddan oo uu horay qalqal siyaasadeed iyo colaado ka dhex aloosnaa.
Safarkii uu wasiirka Arimaha dibbada ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ku tagay Jabuuti si looga wada hadlo xal u helida mandiqadda gaar ahaan xurgufta Jabuuti iyo Eritrea wuxuu bilay heybadii Soomaaliya. Jabuuti waxey hada arki kartaa in Soomaaliya aaney ka raacin danteeda, maadaama markii hore ay ka xumaatay isu soo dhawaanshaha Ereteriya iyo Soomaaliya.
Dalalka Jabuuti iyo Ereteriya ayaa qiray doorka Soomaaliya ay ka dheeshay nabadeynta dalalka geeska Africa, wasiirka arrimaha dibadda ee Jabbuuti, Maxamuud Cali Yuusuf iyo dhiggiisa Erateriya, Cusmaan Saalax ayaa bogaadiyay dadaallada ay dowladda Soomaaliya waddo si loo wanaajiyo xiriirka labadaas dal, loogana gudbo xalna loogu helo khilaafaadkii horay u dhexyaallay waddamadaas.
Isbadallada ka socda Gobalka Geeska Africa oo ay Soonaliaya hormuud katahay waxaa soo dhaweeyay Qaramada Midoobay, Midowga Africa iyo Urur Goboleedka IGAD, waxaana ay amaaneen doorka muhiimka ah ee Soomaaliya ka ciyaareyso dalalka jaarka la ah ee dib u bilaabaya xiriirkoodii dibloomaasiyadeed taa oo sahleysa in wadamadan ay noqdaan kuwo wada ganacsada sidoo kalena kawada shaqeeya nabad galyadooda.
Inkastoo dowladda dhexe lagu dhaliili karo in eysan mudnaan siinin cabashada iyo is faham darada isaga iyo maamul goboleedyada, hadana taasi kama dhigna iney wanaagsan tahay inuu dayaco doorka shariifka ah ee Soomaaliya ku leedahay gobalka Geeska Afrika.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa qalinka kuwada duugay heshiis dhigaya in ay yeeshaan iskaashi dhaqaale, amni, bulsho, dhaqan iyo siyaasadeed, lagana shaqeeyo sidii guud ahaan Gobolka Geeska Afrika loogu soo dabbaali lahaa xasillooni iyo horumar, waxaana Soomaaliya u saxiixay hesiiskan Madaxweyne Farmaajo, kaa oo ka dhacay caasimadda Asmara ee dalka Eriteriya.
Kaalinta Soomaaliya ee Bariga Afrika ayaa u muuqata mid xiiso leh. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu muujiyay ugu yaraan in Soomaaliya ay tahay dal aan looga maarmin go’aamada masiiriga ah ee dalalka ku yaala bariga Africa.
Marka la eego sida dardarta leh ee Soomaaliya kaga qeyb qaadaneyso isbadalka geeska Africa waxaa kuu muuqanaya himilada Soomaaliya ee ah in ay hormuud u noqoto qorshaha lagu abuurayo isbahaysi ganacsi oo dhexmara waddamada Geeska si loo gaaro xasillooni waarta iyo horumar dhaqaale oo ka dhaca waddamada Geeska Afrika.
Hana-qaadka Soomaaliya ayaa u muuqda sidii ay u soo ceshanan laheyd booskii ama kaalintii ay ku lahayd dowladaha horumaray waxaana ay ka bilowday dalalka deriska la ah oo dhincayo badan ka quseeya sida dhaqaalaha iyo nabadgalyada.
Isku soo dhawaanshaha dalalka geeska Africa waxey Soomaaliya ugu faa’ideysan kartaa ganacsi iyo nabad galyo, waxeyna fududaaneysa isu socodka dadka iyo ganacsiga .
Si kastaba, waa mid aysan taariikhuda dabooli karin doorkiii nabadaynta iyo garab istaaga ee Soomaaliya ku lahayd gobolka iyo caalamka intiisa kale,balse taas ayaa meesha ka baxday kadib burburkii dowladdii loo yaqiinay Libaaxa Afrika, Waxaana markaan muuqata in Soomaaliya dib u curatay oo aysan sii jirayn waayo xuumaaday.